Olona tsy manana antom-pivelomana hafa ny ankamaroan’izy ireo nefa manofa trano, mampiana-janaka, mandoa vidin-jiro… raha araka ny fanadihadiana natao teny an-toerana. Tsy manohitra fandaminana izahay hoy izy ireo saingy mangataka vahaolana maharitra avy amin’ny fitondram-panjakana kosa toy ny fanomezana tsena, hoy hatrany ireo mpivarotra izay renim-pianakaviana ny ankamaroany, ankoatra ny famoronana asa ho an’ny tanora, hampihenana ny asa fanendahana sy ny hala-botry. Anisan’ny faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana ihany koa mantsy Anosibe amin’ny ankapobeny ka tsy vitsy ireo mitaraina eny fa na dia ny mpandalo aza. Nomarihin’ireo mpitandro ny filaminana izay manao ny asa fanadiovana moa fa baiko no azon’izy ireo ka tsy maintsy tanterahiny. Tsy hijanona ny asa, hoy hatrany izy ireo raha tsy milamina sy mirindra Anosibe. Lehilahy roa moa no voasambotra nandritra ilay korontana teny an-toerana ny zoma alina teo raha tsiahivina.